Qarax Lagu Dilay Shaqaalo Kenyaati Ah Iyo Shabaabul Mujaahidiin Oo Sheegtay. – Calamada.com
Qarax Lagu Dilay Shaqaalo Kenyaati Ah Iyo Shabaabul Mujaahidiin Oo Sheegtay.
calamada August 14, 2018 2 min read
Warar dheeraad ahaa ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo shalay barqadii ka dhacay deegaan hoostaga degmada Mandheera ee Gobolka NFD ee ay Kenya xoogga ku haysato.
Qaraxa ayaa beegsaday gaari nooca Kooyalka loo yaqaano oo siday shaqaale Kenyaan ah oo ku hawlanaa dhismaha darbiga weyn ee ay Kenya ka dhisayso xad-beenaadka ay la wadaagto Soomaaliya.
Gaariga qaraxa lala beegsaday ayaa marayay deegaanka loo yaqaano Yaadoo oo u dhexeeya Magaalooyinka Ceel Waaq yo Dhamase oo kawada tirsan Gobolka Mandheera ee NFD.
Shaqaalahaan katirsanaa dowladda Kenya ayaa xilliga la beegsanayay waxay kusii jeedeen goob ay ka wadeen dhismaha darbiga la doonayo in lagu kala gooyo magaalooyinka Balad-Xaawo iyo Mandheera ee ay Kenyaatigu gumaysiga ku haystaan.
Inta la xaqiijiyay 3 kamid ah Kirishtaankii Keenyaatiga ahaa ee qaraxa lagu beegsaday ayaa isla goobta ku dhintay halka mid afaraadna uu dhaawac halis ah soo gaaray.
Gaarigii Kooyalka ahaa ee ay wateen ayaa sidoo kale burbur xooggan uu halkaasi kasoo gaaray.
Dowlada Kenya ayaa dhankeeda qiratay khasaaraha nafeed ee shaqaaleheeda kasoo gaaray weerarka ka dhacay deegaankan hoostaga degmada Mandheera.
Sarkaal ka tirsan Dowlada Kenya oo lagu magacaabo Baawal Kamaay ayaa xaqiijiyay in gaari la beegsaday ay la socdeen shaqaale ay dowladoodu u xilsaartay dhismaha darbiga ay ka dhisayaan xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
“Saddex qofood ayaa naga dhimatay kadib markii miino kula qaraxday goob ay shaqo ka wadeen, wadada ku dhirirsan darbiga ayay geedaha ka qaadayeen” ayuu yiri gaalkan u hadlay dowlada Kenya.
Dowlada Kenya ayaa tan iyo sanadkii 2015 ku hawlan dhismaha darbi dheer oo ay doonayso in ay ku kala jarto xaduud-beenaadka Wadamada Soomaaliya iyo Kenya, isla markaana ay ku goosanayso dhul aad u baaxad weyn oo magaalooyinka Soomaaliya, gaar ahaan Balad Xaawo.
Qaraxan maanta ka dhacay Mandheera ee lagu dilay kirishtaanka Kenyaatiga ah ayaa kusoo aadaya maalmo kadib markii qarax sidaan oo kale ah oo ka dhacay Gobolka Laamuu ay ku dhinteen 9 katirsan Milatariga Kenya.
Qaraxaas ayaa waxaa lagu burburiyay gaari kooyal ah oo ay ciidamadu la socdeen xilli uu marayay inta u dhaxaysa deegaanada Boodhaay iyo Majengo ee Gobolka Laamuu.
Idaacada Islaamiga Ah Andalus ayaa baahisay in weerarkaasi qaraxa ah ay fuliyeen ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin,waxa uu weerarkan kusoo aadayaa xilli dhawaan qarax Shabaabul Mujaahidiin ay ka fuliyeen Jaziirada Lamu ee gudaha Kenya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen Labo Iyo Toban askari oo Saliibiyiinta Kenya ah,sidoo kale qaraxaas waxaa lagu gubay gaari Kooyal ah oo askarta Kenya ay la socdeen.
Previous: Madaxweynaha Tuunis “Ragga iyo Dumarka Waa Isku Mid Dhaxalkana Waa Usimanyihiin”.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 03-12-1439 Hijri.